पद्मरत्न तुलाधार : बाचुञ्जेल बेवास्ता, मर्दा औडाहा ! - पद्मरत्न तुलाधार : बाचुञ्जेल बेवास्ता, मर्दा औडाहा !
पद्मरत्न तुलाधार : बाचुञ्जेल बेवास्ता, मर्दा औडाहा !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १९ कार्तिक, 12:06:49 AM
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालको बेडमा छटपटिरहेका पद्मरत्न तुलाधारलाई भेट्न कसैलाई फुर्सद मिलेन । उनी झण्डै दुई हप्ताअघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । मृगौला रोगबाट ग्रसित तुलाधारले दुई पटक डाइलासिस गराएका थिए । खासगरी उनी दोश्रोपटक डाइलासिस गराउदा नै अवस्था पहिलेको भन्दा फेरिएको थियो ।
तर यहीबीचमा मष्तिष्कघात भएपछि उनी यो संसारमा रहन सकेनन । तर उनको निधन लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नर्भिक पुगे । उनको तात्ताको निधनको खबर सुनेर अस्पताल पुग्ने प्रचण्ड एक्लो थिएनन । नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरु पुगे ।
७८ बर्षको उमेरमा तुलाधारले अन्तिम स्वास फेर्दा धेरैलाई उनी नेता हुन र नेपालमा बहुदलका लागि संघर्ष गरेका थिए भन्ने कुरा थाहा थिएन । खासगरी आधुनिक पुस्ताका अहिलेका युवाहरु केही समाचार र अनलाइन स्टोरी बाहेक तुलाधारकाबारेमा त्यति साक्षात्कार हुन पाएनन । जति अथाह ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव र नेपाली राजनीति र इतिहासका बारेमा तुलाधार पोख्त थिए ।
कात्तिक ९ गते साँझ माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनलाई केही दिनअघि मष्तिष्कघातले समातेको थियो । तर उनलाई यसअघि नै मष्तिष्कघात भएको उनको उपचारमा सलंग्न डाक्टरहरुले बताएका छन ।
पञ्चायतका सदस्य, बहुदलका मन्त्री !
तुलाधर काठमाडौ उपत्यकाका रैथाने हुन । उनी काठमाडौँका हरेक गल्लीमा धेरैलाई कण्ठस्थ हुने नाम हुन । पछिल्लो समय उनी नेताभन्दा पनि समाजसेवी र मानवअधिकारकर्मीका नाताबाट बढी चिनिएपनि उनको वास्तविक धरातल भने पञ्चायतकालिन राजनीति हो ।
२०४३ सालमा पञ्चायत सदस्य जितेका उनले त्यतिबेला नै सबैको मन जितेका थिए । पञ्चायतकालिन राजनीति गरेपनि उनले बहुदलको मागलाई जोडदार रुपमा उठाएका थिए ।
२०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले बहुदलको सम्मान गर्नुका पछाडी तुलाधारको हात रहेको कतिपय पञ्चायतकालिन नेताहरुको भनाई थियो । उनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र नागरिकको भलाईमा बढी विश्वास गर्थे । जसलाई उनी प्रत्यक्ष रुपमा अरुलाई पनि प्रभावमा पार्ने हिम्मत राख्थे । उनकै अग्रगामी भूमिकाका कारण कांग्रेसलाई बहुदलको आन्दोलन चर्काउन सजिलो भएको हो ।
तुलाधार पञ्चहरुसँग शासन गरेर बहुदलहरुसँग उठबस गर्थे । पछि उनी कांग्रेसी हुनुको साटो बामपन्थी बने । तर आधुनिक नेताहरुको सोच र व्यवहार वामपन्थीभन्दा दक्षिणपन्थी बढी देखिएपछि उनी राजनीतिबाट पलायन हुने स्थितीमा पुगेका हुन ।
त्यसअघि उनी तत्कालिन मालेबाट २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्री कालमा स्वास्थ्य तथा श्रममन्त्री बनेका थिए । एक पटक मात्रै सरकारमा मन्त्री बनेका उनी काठमाडौँका रैथानेहरुका लागि अधिकारकर्मी तथा समाजसेवीका रुपमा बढी चिनिएका थिए ।
जनआन्दोलनका योद्धा, नागरिकका अभियान्ता !
वामपन्थी नेताहरुलाई हिंसा र लडाईको राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउन पदमरत्न तुलाधारले विशेष भूमिका खेलेका थिए । खासगरी तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउन र ७ दलसँग मिलेर आन्दोलन थाल्न तुलाधरले नै सम्झाएका थिए ।
जुनकारण प्रचण्ड तुलनाधारको निधन सुन्ने वित्तिकै नर्भिक पुगेका हुन । कुनै बेला कट्टर पञ्च भएपनि वामपन्थी हुदैँ नागरिकको भलाईमा लाग्ने अधिकारकर्मी बन्नु उनका लागि सहज होइन । तर उनी परिस्थिती बुझेर आफुलाई परिवर्तन गनृ साहस गर्ने योद्धाका रुपमा साथीहरुमाझ चिनिन्थे ।
२०६२ देखि २०६३ सम्म चलेको आन्दोलनमा तुलधार दलका नेताहरुसँगै सडकमा उत्रिएका थिए । जतिबेला उनले राजनीतिबाट बिदा लिइसकेका थिए । तर नागुिरकको भलाईका लागि काम गर्ने उनले पुरानो सोचलाई थाँती राख्दै नेता र जनतालाई सहयोग गरेका हुन ।
सन्यासी जीन्दगी, अनवरत अधिकारकर्मी
वामपन्थी सोच राखेर मन्त्री समेत भएका तुलाधारले २०५६ सालमा राजनीतिबाट निष्क्रिय बन्ने निर्णय लिए । त्यसपछि उनले मानवअधिकार र सर्वसाधारणको हितका लागि अधिकार खोज्ने अभियानमा लागे ।
नेपालका ठूल्ठूला परिवर्तन हुने बेला उनी नेताभन्दा बढी अधिकारकर्मी भएका थिए । त्यही भएर अहिलेको पुस्ताले उनलाई नेताभन्दा बढी अधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादीका रुपमा चिन्छ । जुन नयाँ पुस्ताका लागि भुल थियो ।
मृगौलामा समस्या देखि नै उपचारमा बेवास्ता गरेका उनलाई सरकार र नेताहरुले पनि हेरेनन । राजनीतिक क्रान्तिका केही ठूला व्यक्तित्व बनेका उनलाई नेताहरुले समयमै चिन्न र उनको हेरचाह गर्न सकेनन । जसबाट नयाँ पुस्ताले केही सिक्न सक्थ्यो ।
बाचुञ्जेल तुलाधारलाई बेवास्ता गर्नेहरुलाई अहिले उनको निधनपछि भने औडाहा भएको छ । सुन्दा केही नमिठो लागेपनि नेपाली समाज र नेताहरुको प्रवृत्ति हेर्दा केही कुरा गुमिसकेपछि मात्रै सोच्ने कुरा भने औडाहाजत्तिकै हो । जुन अहिले तुलाधारको श्रद्धाञ्जलीमा नेताहरुलाई लागिरहेको छ ।
२०७५, १९ कार्तिक, 12:06:49 AM
डा. गोविन्द केसीका समर्थकले गरे सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
आज पुस १ गते, कालो दिवसका रुपमा मनाइँदै !